. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: June 2010
စိတ် အေးချမ်းမှု အလင်းကို
မိန်းမပျိုလေး အပြုံး တခက်အတွက်
တထောင် ရှစ်ရာ နှစ်ဆယ့် ငါး ရက်
ဒီနေ့က ချစ်တရေး(မိုးခါးအခေါ်) မေလေးနဲ့ ကိုကိုရဲ့ အမှတ်တရ တရက်မို့လို့ ဒီကဗျာလေးကို လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ် ..
မေလေးနဲ့ ကိုကို အသက်ထက်ဆုံး ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ လက်တွဲသွားနိုင်ပါစေ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/24/2010 11:54:00 AM 19 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ကဗျာ ထင်တယ်, သူငယ်ချင်း, အမှတ်တရ
ငယ်တုန်းတည်းက ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့မြို့တမြို့ပါပဲ ..
သံလျင်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ဥာဏ်တွေကတော့ .. ဗိုလ်ချုပ်ရွာ .. ကျိုက်ခေါက်ဘုရား .. ကျောက်တန်းဘုရား .. အဖွားဒေါ်ခြူ .. ရှင်မွေ့နွန်းနဲ့မင်းနန္ဒာ .. ငမိုးရိပ်ချောင်းနဲ့ တံတား .. စသည်တို့ပါပဲ ..
ဗိုလ်ချုပ်ရွာက ဖေကြီးဘက်က ဖိုးဖိုးကြီးရဲ့ ချက်မြုပ်ပေါ့ .. ကြားဘူးနေတာတော့ ဖိုးဖိုးကြီးက သူကြီးသားဆိုလား သူကြီးမြေးဆိုလားပါပဲ .. အိမ်မှာ ဓါးကြီးတလက်ရှိတယ် .. ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာတော့ မေ့ပြီ .. ထမင်းစားပွဲရဲ့ အပေါ်နားကျကျမှာ တန်းလန်းဆွဲထားလေရဲ့ .. အဲဒါ အိမ် အဟောင်း ၁ထပ်ခွဲအိမ်လေးတုန်းကပါ .. ခုဆို ဘယ်နားရောက်နေမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး .. ဖိုးဖိုးကြီးက ရွာမှာ မနေချင်လို့ စာသင် မြို့တက်ပြီး ရုံးစာရေးဝင်လုပ်ရာက အဖွားနဲ့တွေ့ .. အဖွားက မြို့သူ .. ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်တွေပါ ရန်ကုန်မြို့သူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် သံလျင်ဆိုတာ အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်လို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ငယ်တုန်းတည်းက တော်တော်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ် .. ဖေကြီးတို့ ဖိုးဖိုးကြီးတို့ ပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့လည်း နားယဉ်နေခဲ့ပါတယ် ..
ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေ သွားတိုင်းလိုက် ရောက်တဲ့နေရာ စားသောက်နဲ့ ပျော်ခဲ့တယ် .. အိမ်တွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်ရင်း ဘယ်လိုအမျိုးတော်တယ်ပြောတိုင်း အူကြောင်ကြောင် ကြည့်ဘူးတယ် .. တရွာလုံးက လူတွေကို အမျိုးတွေပါလားလို့ မှတ်ထားလိုက်တယ် .. ခုနောက်ပိုင်းလည်း သံလျင် ဗိုလ်ချုပ်ရွာက တရားစခန်းကြောင့် လစဉ်ရောက်ဖြစ်နေသေးတယ် .. ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရင်တောင် အိမ်က လူကြီးတွေ ရောက်တယ်ဆိုတာ ကြားကြားနေတယ် ..
ကျိုက်ခေါက်ဘုရားကတော့ သံလျင်ကို ရောက်တိုင်း မရောက်မဖြစ်လိုကို သဘောပိုက်ပြီး ရောက်ဖြစ်တယ် .. မုခ်ပေါင်းစုံကနေလည်း အတက် အဆင်းလုပ်ဘူးတယ် .. အဲဒီက ဂေါပကတွေကလည်း အမျိုးတွေတဲ့ .. အမျိုးမဟုတ်လည်း တနည်းနည်းနဲ့ ပြောရင်း ဆိုရင်းကနေ သိကုန်ကြပြန်ရော .. ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပေါ်ကနေ သံလျင်မြို့ကို ကြည့်ပြီး ဖေကြီးတို့ပြောတဲ့ ဟိုဘက်နားက အဘိုးတွေရဲ့ လယ်တွေ အဲဒီလယ်မှာ နွားက ဘယ်နှစ်ကောင်မွေးတာ ဘာညာဆိုတာလည်း သတိရနေတုန်းပဲ ..
သံလျင်ရောက်တိုင်း ကျောက်တန်းကိုမရောက်ဖြစ်ဘူး .. ကျောက်တန်းသွားကြမယ်ဆို စီစဉ်ပြီးသွားမှ ရောက်ဖြစ်တယ် .. ကျောက်တန်းသွားလို့ မော်တော်စီးရတာ အရမ်းသဘောကျတယ် .. မရောက်ချင်ဘူး သွားတဲ့နေရာကို မော်တော်ပဲ စီးချင်နေတာ .. တခါတလေ မော်တော်မောင်းတဲ့လူက ပတ်သေးတယ် .. တချို့ကျ တန်းမောင်းတော့ ခဏလေးနဲ့ ရောက်ရောက်သွားတယ် .. ကျောက်တန်းရောက်ပြီဆို ဘုရားဖူးတာက ခဏ အပျော်ဆော့နေတာ ပိုများတယ် .. အိမ်နဲ့သွားရင် အမြဲတမ်း အမေနဲ့ အဒေါ်က စားဖို့ သောက်ဖို့ အိုးတွေခွက်တွေနဲ့ ထွက်လေ့ရှိတော့ ရောက်ရင် နေရာရှာ ထမင်းချိုင့်တွေဖွင့်ပြီး စားကြတာပဲ .. ပြီးရင် ပေါက်ပေါက်ဆုတ်ဝယ် ငါးစာကျွေး .. နောက်ထပ် သတိရနေတာ အိမ်သာပဲ .. သိတယ်မလား .. ဒိုးယိုပေါက် .. :P .. ခုတော့ တမျိုးဖြစ်လောက်ပါပြီ .. တခါကလည်း မောင်လေး ကျောင်းနားတုန်း ကျောက်တန်းသွားကြတယ် .. မောင်လေးက ငှက်ဖျားရှိတော့ လေလည်း တအားတိုက်ရော ငှက်ဖျားက ထရော .. ပြန်ပြေးရတော့တာပဲ ..
အဖွားဒေါ်ခြူဆိုတာ အဘွားတော့တော်တယ် ဘယ်လိုဘယ်ပုံစပ်ရတယ်တော့ မသိတော့ဘူး .. ယောဂီဝတ်နဲ့ ဆုံးသွားတာလည်း ကြာပေါ့ .. ဒါပေမယ့် အဖွားဒေါ်ခြူရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို မြင်နေမိသေးတယ် .. ပိန်ပိန်ပါးပါး အညိုရောင် ယောဂီဝတ်စုံနဲ့ပဲ မြင်ဘူးလိုက်တဲ့ အဖွားပေါ့ .. မျက်နှာမှာ မှဲ့တွေနဲ့ အသက်လည်း အတော်ရှည်ပါတယ် .. လိုအပ်မယ်ထင်တာတွေ ၀ယ်ပြီး ရောက်သွားတိုင်း ရှိတာတွေ ချကျွေးတာ .. ကျမတို့ကတော့ ဇရပ်ရှေ့မှာ ဆော့ကြပေါ့ .. ပြန်ဖို့ ကားပေါ်တက်ပြီး ကားထွက်တာနဲ့ အဖွားတာ့တာလုပ်တဲ့ပုံက ကိုယ်တွေ ပုံမှန်လုပ်သလို လက်ကို ဝှေ့ယမ်းပြတာမဟုတ်ပဲ သွားတော့လို့ လက်ကို ခါပြသလိုဖြစ်ဖြစ်နေတာ .. အဲလိုနှုတ်ဆက်တိုင်းလည်း ကားပေါ်ရောက်နေတဲ့ မိုးခါးတို့ပြောနေကျက ဘယ်ချိန်တည်းက ပြန်စေချင်တယ် မသိဘူးပေါ့ .. သွားတော့ဆိုတာချည်းပဲ အတင်းနှင်နေတာပဲလို့ အချင်းချင်း အတင်းအုပ်တတ်တယ် ..
ရှင်မွေ့နွန်းနဲ့မင်းနန္ဒာ အကြောင်းကတော့ သိပ်နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့ ပုံပြင် ဒဏ္ဍာရီပဲ .. တော်တော်လည်း ကြိုက်တယ် .. အခေါက်ပေါင်းများစွာ ကြားဘူးတယ် .. ပြန်ပြောတိုင်းလည်း နားထောင်တယ် .. သနားတယ်ပေါ့ .. နားထောင်တိုင်း မျက်စိထဲပါ ပုံပေါ်လာသလိုပဲ .. မလက်တို ငမိုးရိပ်ရဲ့ ရန်သူက (မေ့တေ့တေ့ :P) အဲဒီဇာတ်ရဲ့ ဗီလိန်ပေါ့ .. သူ့ကို တော်တော်မုန်းတယ် .. မင်းသားလေးကို တော်တော်သနားတယ် .. မင်းသမီးလေးရောပေါ့ .. ဒါပေမယ့် မင်းသမီးလေးကြောင့် မင်းသားလေး ဘုန်းနိမ့်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့ မင်းသမီးလေးကို သိပ်တော့ မကြည်ဘူး .. သူများခိုင်းတိုင်း လုပ်လို့ .. ဇာတ်လမ်း အဆုံးမှာ မီးခိုးနှစ်ခု ပေါင်းသွားတယ်ဆိုတာကို မျက်စိထဲမြင်ပြီး နဲနဲ ကျေနပ်လိုက်သေးတာ .. သံလျင်မှာ ရှင်မွေ့နွန်းဘုရားဆိုပြီး ရှိတယ် .. တောင်ထိပ်လေးလိုပေါ်မှာ .. ကားနဲ့ဖြတ်သွားရင်းပဲ မြင်ဘူးတယ် .. တခါမှတော့ မရောက်ဘူးဘူး .. ကြားဘူးတာက အတွဲတွေ သွားရင် ကွဲတတ်တယ်တဲ့ ..
ငမိုးရိပ်ကတော့ ဇာတ်ပို့ပေါ့ .. ကြိမ်စင်္ကြာနဲ့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ မိချောင်းကြီး .. သူ့ခံတွင်းထဲ ငုံထားခံရတဲ့ မင်းသားလေး .. မင်းသားလေးနဲ့ မင်းသမီးလေးအတွက် သူက မြှားနတ်မောင် ခေါ်မလားပဲနော် .. ခံတွင်းထဲက ထုတ်လိုက်ပြီး သူ့သခင် မင်းသားလေး အသက် မရှိတော့တာ သိတော့ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာမလဲပေါ့ .. တွေးတာ တွေးတာ .. :D
အရင်က သာကေတဘက်က တံတားမရှိသေးတော့ ငမိုးရိပ်တံတားကပဲ ဖြတ်ပြီး သံလျင်ကို သွားရတယ် .. တံတားပေါ်က ဖြတ်တိုင်း ရှင်မွေ့နွန်း မင်းနန္ဒာ ဇာတ်လမ်းနဲ့ အတူ ငမိုးရိပ် မိချောင်းကြီးပါ မြင်ယောင် သတိရတယ် .. မင်းသမီးလေးကို သွားတွေ့တိုင်း ဟိုဘက်ကမ်းကနေ ချောင်းကို ဖြတ်ဖို့ ငမိုးရိပ်ကိုစီးပြီး သွားတာပါလားပေါ့ .. စိတ်ကူးနဲ့ မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ် .. ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ငမိုးရိပ်တံတားကို မဖြတ်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ .. သံလျင်သွားတိုင်းလည်း သာကေတ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာဘက်မှာရှိတဲ့ တံတားကပဲ ဖြတ်ဖြစ်တော့တယ် ..
အတိတ်တွေကလည်း ဝေေ၀၀ါးဝါး ဖြစ်ကုန်ပြီ .. ပုံရိပ်တွေကလည်း ကောက်ကြောင်းလိုက်ရ ခက်ခက် လာတယ် .. အရာဝတ္တုတွေက အစ လူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက် စာရိတ္တတွေ အဆုံး တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာလိုက်တာ အရင်က မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြုံးရွှင်ပြီး ပြန်နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကနေ ခပ်မှန်မှန် ခပ်တန်းတန်းတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ .. သူဘာလဲ ငါဘာလဲ ဆိုသလိုမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ .. ပကာသန ဂုဏ်တု ဂုဏ်ပြိုင်ဆိုတာကလည်း မရှိရင်ကောင်းမယ် ဆိုပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ရှိကို ရှိနေတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်နေပြန်တယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/15/2010 11:44:00 PM 17 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ရင်ထဲရှိသော မြို့လေးများ, အမှတ်တရ
ဒီနေရာလေးကိုပဲ ကျမ ရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီ ..
ဦးတည်ချက် မရှိပဲ သွားလာလိုက်တဲ့ အခါတိုင်း အညို့ခံထားရသူတယောက်လို ဒီနေရာဆီပဲ ရောက်ရောက်လာဖြစ်တယ် .. ဒီနေရာကို ရောက်တိုင်းလည်း ကျမတို့ (အရင်တချိန်ကတော့ ကျမတို့ပေါ့လေ .. ခုတော့ ကျမ တယောက်တည်း ..) အတူထိုင်ဖူးတဲ့ ခုံလေးမှာ ကျမ ထိုင်ဖြစ်တယ် ..
ဟိုးအရင်တည်းက ဖက်ဖူးစိမ်းရောင် ခုံတန်းလေးက ခုလည်း ဖက်ဖူးစိမ်းရောင်လေးနဲ့ သစ်လွင်နေတယ် ..
ဒီနေ့တော့ ထိုင်နေကျ နေရာမဟုတ်တဲ့ ခုံတန်းလေးကို မြင်သာယုံနေရာလေးတနေရာမှာ ကျမ ထိုင်နေလိုက်တယ် .. ဒီ ခုံတန်းလေးမှာ ဘယ်သူတွေများ လာထိုင်လိမ့်ဦးမလဲ .. ချစ်သူနှစ်ဦးလား သူငယ်ချင်းမလေးနှစ်ယောက် ဖြစ်မလား .. အသင့်ပါလာတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ဖတ်ရင်း ဘာရယ်မဟုတ်ကျမ စောင့်ဆိုင်းနေလိုက်တယ် ..
ကျမ နားထဲ မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ ငိုသံလား ..
အသံလာရာ ခုံတန်းလေးဆီ လှမ်းကြည့်မိတော့ မိန်းကလေးတယောက်က ငိုနေတယ် .. ဘေးနားက ကောင်လေးကတော့ သုန်သုန် မှုန်မှုန်နဲ့ ထိုင်နေတယ် .. ပုံစံက မိန်းကလေး အငိုတိတ်အောင်တောင် ချော့ဖို့ အင်အားမရှိတော့တဲ့ ပုံစံမျိုး ..
ကောင်လေးက "ကိုယ်လည်း ဘယ်လက်ခံချင်မလဲကွာ .. ဒါပေမယ့် အိမ်က အကုန်စီစဉ်ပြီးမှ ကိုယ် သိလိုက်ရတယ် .. ကိုယ်သိတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးက လွန်နေပြီ .."
မိန်းကလေးဆီက ငိုသံက လွဲပြီး ဘာစကားသံမှ ထွက်မလာခဲ့ဘူး .. မိန်းကလေး ဆက်တိုက်ငိုတယ် .. ကောင်လေး ပုခုံးကိုလည်း မမှီဘူး .. တယောက်တည်း တသိမ့်သိမ့် ငိုတယ် .. အားရအောင် ငိုတယ် ..
ခဏကြာတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေး ခေါင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ်ဆွဲမှီခိုင်းတယ် .. ဒါပေမယ့် မိန်းကလေး တွန်းဖယ်ခဲ့တယ် .. ပြီးတော့ မိန်းကလေးက မျက်ရည်မှန်သမျှ သူ့လက်ခုံနဲ့ သုတ် သူ့ကိုယ်သူ ပြုပြင်ယူလိုက်ပြီး စကားပြောဖို့ အားယူလိုက်တယ် .. ပြီးတော့ ..
"နင် ငါ့ကို လိမ်တယ် .. ငါတို့ကြားထဲမှာ ဒါတွေ မလိုအပ်ပါဘူး .. နင် သိပ်အထင်ကြီးတဲ့ ဆရာဝန်မမကို လက်ထပ်မယ်လို့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောခွင့် ရှိပါတယ် .. ငါ သိနေခဲ့တာ ကြာပြီ .. ဒီအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ပြီးသားပါ .. ငါ ခု ငိုတယ်ဆိုတာ ငါတို့ရဲ့ ပတ်သက်မှုအတွက် နောက်ဆုံးမျက်ရည်ပါ .. ငါ မောနေပြီ .. အတွေးတွေနဲ့ မောနေခဲ့တာ ကြာပြီ .. ခုတော့ ငါ သက်ပြင်းချလိုက်နိုင်ပြီ .. ထပ်မျှော်လင့်စရာ မရှိတော့တဲ့ ဇာတ်လမ်းအတွက် ငါ ဆုံးဖြတ်ပြီး အဆုံးလည်း သတ်နိုင်ပါပြီ .. အရင်နေ့တွေကတော့ ငါမောနေခဲ့တယ် .. ကြုံတွေ့လာမယ့် အနာဂတ်အတွက် ကြိုတွေးပြီး ပင်ပန်းနေခဲ့တယ် .. ဒီလောက်ဆို လုံလောက်သွားပြီ .. ငါတို့ နှစ်ယောက်လုံး ဘယ်သူမှ သာတယ် နာတယ် မရှိပါဘူး .. စိတ်တူကိုယ်တူ ငါတို့ အတူရှိနေခဲ့ဘူးပြီ .. တယောက်ကြောင့် တယောက် ပျော်ရွှင်ရတယ် .. အမှတ်တရ တခုအဖြစ်တော့ ငါ သိမ်းမထားချင်ဘူး .. ဒါပေမယ့် သေချာတာက လှပတဲ့ အတိတ်တခုပါပဲ .. ဒီအတွက် ငါ နင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ငါတို့ အဆင်ပြေပြေ လမ်းခွဲကြတာပေါ့ .. သာယာတဲ့ ဘ၀တခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ .. ဘာပြောချင်သေးလဲ .. ပြောစရာ မရှိတော့ရင် သွားနှင့်တော့မယ် ..
ကောင်လေးဆီက ဘာစကားသံမှ ထွက်မလာခဲ့ဘူး ..
မိန်းကလေး ပြောဆိုအပြီးမှာတော့ အရင် ထွက်သွားခဲ့တယ် ..
ကောင်လေး မျက်နှာမှာ တိမ်မဲတွေ စွဲထင်နေသလိုပဲ .. ဒါဟာ တွေဝေခြင်းလား .. နောင်တလား .. သူ ဘာကို မျှော်လင့်ခဲ့သလဲ .. သူ ရရှိသွားခဲ့တာ ဘာလဲ .. ကျမ အတွေးတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပြီ ..
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တခုက ဒီခုံလေးမှာပဲ ချစ်သူနှစ်ဦး ခုလို အဖြစ်မျိုး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် .. ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်တော့ မတူခဲ့ဘူး ..
မိန်းကလေး မျက်ရည် ကျတယ် .. ကောင်လေးက ချော့ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကောင်လေးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ပြောင်းမသွားခဲ့ဘူး ..
မိန်းကလေး မပြတ်သားခဲ့ဘူး .. ကောင်လေးကို တောင်းပန်ခဲ့တယ် .. ဒါပေမယ့် ကောင်လေးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ပြောင်းမသွားခဲ့ဘူး ..
နောက်ဆုံး ကောင်လေး ထွက်သွားခဲ့တယ် .. မိန်းကလေးကတော့ ကျန်ရစ်သူ .. ခုထိလည်း အတိတ်မှာ ပျော်မွေ့ချင်နေသေးသူ ..
အချစ်ဇာတ်လမ်းတခုရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ အရှုံးအနိုင် ဆိုတာသာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျန်ရစ်သူ မိန်းကလေးကတော့ အရှုံးတွေ ထပ်လို့ပေါ့ .. ဘယ်လိုလဲ ဆက်ပြီး အရှုံးခံနေဦးမလား ..
မေးခွန်းတွေ တွင်တွင် ထုတ်ရင်း သူမ လာရာလမ်းကို ပြန်လျှောက်နေခဲ့ပြီ .. မျက်နှာမှာတော့ သူမရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုအတွက် ရှက်ပြုံးတခုကို ဆင်ယင်ထားတယ် .. ပုစ္ဆာတပုဒ်ကို အဖြေရသွားတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်နဲ့လည်း ဆင်တူပြန်တယ် .. အတွေးထဲမှာတော့ နောက်ချန်ခဲ့တဲ့ ခုံတန်းလေးဟာ သာမန် ခုံတန်းလေး အဖြစ်နဲ့သာ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/14/2010 12:02:00 AM 12 comments:
ရနံ့တခုနှင့် စွဲလန်းခြင်း ပြဿနာ
ရနံ့တချို့ကို ကျမ မုန်းပါသည် ..
ဥပမာ - ဂတ်စ်အိုးမှ ဆိုးဝါးစွာထွက်ပေါ်လာတတ်သော ဂတ်စ်နံ့ .. ထိုအနံ့ကို ကျမ မနှစ်သက်သော ဒူးရင်းသီးအနံ့နှင့် ဆင်တူသည်ဟုလည်း ကျမ စွပ်စွဲတတ်သေးသည် .. အချို့ပန်းများ၏ ထုံအီအီ အနံ့များ .. ရေမွှေးနံ့ ပြင်းပြင်းများ နှင့် ဓါတ်ဆီ အနံ့ .. ထို့အပြင် အင်းစက်ပိုးမွှားကောင်များ၏ အနံ့များ ဆိုးဝါး ညစ်ပတ်သော အနံ့များ ထိုအရာများကို နံသည်ဟု သတ်မှတ်၍ ကျမ စွဲစွဲမြဲမြဲ မုန်းပါသည် ..
လွန်ခဲ့သော နှစ်အချို့အတွင်းမှာ ကျမ ရနံ့တခုကို ရရှိခဲ့သည် .. ထိုရနံ့သည် ကျမ၏ ဘေးတွင်လည်း တစိုက်မတ်မတ်ရှိခဲ့သေးသည် .. ထိုရနံ့ကို ကျမ စွဲလန်းချိန် နှစ်ချို့ခဲ့သည် .. ထုံအီမူးဝေစေသော ထိုရနံ့နောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်မိသည်အထိ ကျမ စွဲလန်းခဲ့ဘူးပါသည် ..
ထိုရနံ့ကို အခြားနေရာတွင် ရရှိခဲ့ပါက စွဲလန်းဖို့ မသေချာခဲ့ပါ .. တစုံတယောက်နှင့် ပတ်သက်၍ တဖြည်းဖြည်း ရင်းနှီးကာ နှစ်သက်လာခဲ့သည် .. ပြီး ပို၍ စွဲလန်းလာခဲ့သည် .. ထိုရနံ့သယ်ဆောင်သူကို ကျမ၏ နံဘေးတွင် ရှိနေစေချင်ခဲ့သည် ..
စွဲလန်းခြင်းဆိုသော အရာသည် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ စွဲမြဲတည်ရှိမယ် ကျမ ကောင်းစွာ မခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါ .. ကျမ စွဲလန်းနှစ်သက်ဖူးသော ထို ရနံ့ကိုလည်း ဘယ်လောက် ကြာကြာ စွဲမြဲနှစ်သက်နိုင်လိမ့်မယ် မသေချာခဲ့ပါ .. သို့ပေမယ့် ကုန်လွန်ခဲ့သော အရင်အချိန်ကာလ တခုမှာတော့ ထိုရနံ့သည် ကျမ၏နံဘေးတွင် အသေအချာ တည်ရှိနေခဲ့လေသည် ..
ရက်စွဲတချို့ ပုံမှန် ကုန်လွန်ခဲ့သည် .. အရာအားလုံးသည်လည်း ပုံမှန်ဟု ဆိုနိုင်သည် .. ကျမအတွက် ပုံမမှန်ခြင်း တခုက ကျမ နှစ်သက်သော ရနံ့နှင့် ဝေးကွာနေခြင်းပင် .. ထို ရနံ့နှင့် ပိုင်ရှင်ကို ကျမ လွမ်းဆွတ်စွာ သတိရနေခဲ့သည် .. နောင် အချိန်အတိုင်းအတာ တခုထိလည်း ကျမ သတိရနေဦးမည် .. ကျမ ထိုရနံ့နှင့် ဝေးကွာခဲ့သည်မှာ ကျမအထင် နှစ်ဝက်စွန်းစွန်း ရှိနေခဲ့ပြီ ..
သတိထားမိသည်က လွန်ခဲ့သော လတွေကထက် ကျမရဲ့ တမ်းတချိန်တွေ ကျဲပါးလာခဲ့သည် .. တိုက်ဆိုင်မှုနှင့် တချို့အချိန်များမှ လွဲ၍ ထို ရနံ့အကြောင်း ကျမ မေ့လာနိုင်ခဲ့ပြီ .. ဟုတ်သည် နောင်တွင် ယခုထက်ပို၍ ကျမ မေ့ရလိမ့်မည် .. နောက်နောင်များတွင် အလိုလိုနေရင်း ကျမ မေ့သွားလိမ့်မည် ..
တမ်းတရူးသွပ်စွာနှင့် စွဲလန်းဖူးပြီ .. ထို့အတူ ပျက်စီးခဲ့ဖူးပြီ .. ပြန်၍ အသစ်တခု ဖြစ်လာဦးမည် .. ကျမ ပြန်လည်၍ စွဲလန်းလိမ့်ဦးမည် ..
ever every စကားလုံးများ တွင်တွင်သုံးခြင်းကို ကျမ မုန်းသည် .. ထာဝရဆိုသော စကားကို ကျမ မယုံကြည်တော့ .. ထို ထာဝရသည်လည်း အချိန်အခါနှင့် စိတ်ခံစားမှုပေါ် လိုက်၍ ပြောင်းလဲတတ်သည် .. ကျမ လက်မခံချင်လည်း မရ .. ဒါသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေခြင်း ဖြစ်သည် .. ဒီအတွက် ဝမ်းနည်းစရာ မလိုသလို တွေ့ကြုံလာသမျှ လက်ခံတတ်ရုံသာ ..
လက်ခံတတ်ရမည် .. လက်လွှတ်တတ်ရမည် ..
လူတိုင်းအတွက် အချိန်ဆိုသော သမားကောင်း ရှိသည် .. ဝေဒနာမှန်သမျှ ထိုသမားကောင်းက ကုစားပေးလိမ့်မည် ..
နောက် ကျန်ရှိနေသော ဖြတ်သန်းရမည့် အချိန်များအတွက် မေ့သင့်သည်များကို မေ့ဖို့ ကြိုးစားရမည် .. တည်ဆောက်သင့်သည်များကို တည်ဆောက်ရမည် .. ပြုပြင်သင့်သည်များကို ပြုပြင်ရမည် ..
လောကကြီး ပုံမှန် လည်ပတ်နေသည် .. အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ ကြိုးကို ကြိုးစားရလိမ့်ဦးမည် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/11/2010 12:09:00 AM 13 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ အက်ဆေး, အတွေး စိတ်ကူး
ကျောင်းဖွင့်ချိန် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး (စာနာမှုနဲ့ ဖေးကူပါ)
အရင်နှစ် ဒီလိုအချိန်တုန်းက ဘလော့တခုမှာဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကုသိုလ် အဖွဲ့ရဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ကလေးများအတွက် အဓိကထားပြီး ကျောင်းထားပေးမယ့် အစီအစဉ်ကို သိလိုက်ရပါတယ် .. စာကိုဖတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားမိလို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ် .. ပြီးတော့ ကျောင်းသူလေးတယောက်အတွက် အလှူငွေထည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. အလှူငွေထည့်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ ကိုအောင်နိုင်စိုးက ကိုယ်တာဝန်ယူ ကျောင်းထားပေးတဲ့ ကလေးရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အီးမေးနဲ့ ပြန်စာပို့ပေးခဲ့ပါတယ် ..
၂၀၁၀/၁၁ စာသင်နှစ်အတွက် အစီအစဉ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် .. Lotus Foundation နဲ့ ကုသိုလ် အဖွဲ့တို့ရဲ့ ၂၀၁၀/၁၁ စာသင်နှစ်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်ပါ ..
ကျမတို့ ငယ်တုန်းတည်းက မိဘနဲ့ မပူမပင် နေထိုင်ခဲ့ကြရတယ် .. ခုလည်းပဲ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့ သူ နေထိုင်နိုင်ကြတယ် .. ကျမတို့ လစဉ် အသုံးစရိတ် ဘယ်လောက်လောက် ရှိမလဲ .. ???
အဲဒီ အသုံးစရိတ်တွေထဲက နဲနဲလောက် လျှော့သုံးပြီး ကလေးတဦးအတွက် တယောက် တလက်နဲ့ ကူညီသွားကြမယ်ဆိုရင် .. ကလေးတယောက် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ လူဝင်ဆန့်အောင် အသိပညာထည့်ပေးနိုင်ဖို့ ကျမတို့ ကူညီကြရအောင်ပါ ..
ကလေးတယောက်အတွက် တလစာ ကျောင်းစရိတ် သတ်မှတ်ချက်ကတော့ -
မူလတန်း = S$ ၁၅ / month
အလယ်တန်း = S$ ၂၀ / month
အထက်တန်း = S$ ၂၅ / month သတ်မှတ်ထားပါတယ် ..
လှူတဲ့အခါလည်း ကိုယ်အဆင်ပြေသလို လှူနိုင်ပါတယ် .. တလချင်းဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဝက်စာဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေသလို လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် .. စာသင်လက ၈ လ ပါ .. မူလတန်းကလေးတယောက်အတွက် ၁နှစ်စာ ကျောင်းစရိတ်က စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂၀ ကျပါမယ် .. အလယ်တန်းအတွက် ၁၆၀ ကျပါမယ် .. အထက်တန်းအတွက် ၂၀၀ ကျပါမယ် .. ကိုယ်အဆင်ပြေသလို ခွဲပေးလို့ရပါတယ် ..
စဉ်းစားမိတယ် .. စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅ ကျပ် မြန်မာငွေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ .. ၇၀၀ နဲ့တွက်ရင် ၁၀၅၀၀ ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေ ၁သောင်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဘာများလုပ်နိုင်မလဲ .. လ္ဘက်ရည် တခွက် ၁၅၀ ၂၀၀ (အရင်နှစ်ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ဈေးပါ ..) ထမင်းစားရင် ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ .. ငွေ ၁သောင်းကို ဘယ်နှစ်ရက် သုံးလို့ရမလဲ ..
ကျမတို့ ဒီမှာ တရက် အသုံးစရိတ် ဘယ်လောက်သုံးသလဲ .. ထမင်းတခါစား ၂ကျပ်ခွဲ ၃ကျပ်ဆိုတာ အောက်ထစ် .. အအေးသောက်မယ် .. ၅ကျပ်လောက် တန်းနေပြီ .. မစဉ်းမစားပဲ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ဖြုန်းတီးတာ မပါသေးဘူး .. တခါတလေ ကိုယ်လုပ်နေတာတွေက မတရားသလိုတောင် ခံစားမိတယ် ..
လူရယ်လို့ဖြစ်လာတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပြုဖူးတဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေကို ခံစားရသူတွေချည်းပါပဲ .. ကောင်းကျိုးတွေ ခံစားနေရသူတွေအဖို့လည်း အကောင်းတွေမှာ သာယာနေရုံတင်မဟုတ်ပဲ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကောင်းမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် .. ကျမတို့ ခု လက်ရှိ ကောင်းနေတဲ့ အခြေအနေလေးကို တတ်နိုင်သလောက် လက်လှမ်းမှီသလောက် မျှဝေရအောင်ပါ ..
ကျမ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းတဲ့ ကိုအောင်နိုင်စိုးရဲ့ အီးမေး လိပ်စာကတော့ aungns@gmail.com ပါ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/09/2010 10:47:00 PM5comments:
အကြောင်းအရာခွဲ မျှဝေခြင်း, နှိုးဆော်စာ
ကျောင်းဖွင့်ချိန် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး (စာနာမှုနဲ့ ဖေး...